* Waa inaan rumaynaa in Alle og yahay wax kasta koonka dhex yaalla, iyo wax kasta jira iyo wixii jiri doona ilaa maalinta qiyaame, wax yar kama fakanin ogaanshihiisa.
* Wuxuu ogaaday falalka addoomaha iyo arsaaqtooda iyo waqtiyadooda, iyo kuwooda naarta galaya iyo kuwooda jannada galaya abuuristooda ka hor.
* Alle ayaa ku qoray maqaadiirtan "looxa maxfuudka" abuurista samadaha iyo dhulka konton kun sano ka hor, "looxa maxfuudkan" qof arki karo ma jiro, xataa malag la soo dhoweeyay ama nabi la soo diray.
* Xataa uurjiifka marka uu caloosha hooyadiisa ku jiro Alle ayaa amraya malaa'igta inay qorto lab hadduu yahay ama dheddig, waxay qorayaan arsaaqdiisa iyo waqtigiisa, iyo meesha uu ku dhamaanayo -jannada ama naarta-, waxaa kaloo ay qorayaan waxa uu la kulmayo wanaag iyo xumaanba.
* Ka dib marka laylatulqadarka la gaaro, wixii la qadaray sanadka ayaa laga soo dejinayaa "looxa maxfuudka" dadka waqtiyadooda iyo arsaaqdooda, qofkii xajka aadaya sanadka iwm., arrinta sanadka oo dhan ayaa la qadaraa.
* Ka dib maqaadiirta maalin kasta ayay waqtigeeda ku imaanaysaa iyo dadka loogu talaggalay, Alle dad ayuu kor u qaadaa dadna hoos ayuu u dhigaa.
* Waxaan rumaynaynaa doonista Alle inay fulayso, wixii uu doono waa ahaanayaa wixii uuna doonin ma ahaanayo, ma jiro qof Alle ka adkaan karo, isaga ayaana quluubta gedgeddiya, wuxuu ku hanuuninayaa qofka uu rabo fadlagiisa iyo naxariistiisa, wuxuu ku lumiyaa qofka uu rabo cadligiisa iyo xigmadiisa, waa midka og kan mutaysanaya hanuunka iyo kan mutaysanaya baadinimada.
* Alle lama weyddiiyo waxa uu sameeyo, laakin dadka waa la weyddiiyaa.
* Inaan rumayno Alle inuu wax kasta abuuray, wax yar koonka ma dhex joogo oo aan Alle abuurin, wuxuuna abuuray dhaqdhaqaaqiisa iyo xasilloonidiisa.
* Wuxuu abuuray addoomaha iyo falalkooda, wuxuuna ku abuuray addoomaha awood iyo rabitaan si ay u doortaan falalkooda.
* In Alle -subxaanahu wa tacaalaa- amray khalqigiisa dhaacadiisa, wuxuuna ugu yaboohay jannadiisa, wuxuuna ka reebay macsiyadiisa wuxuuna ugu gooddiyay naartiisa, kumana kallifin wixii ay awoodaan mooyee, waxay u qaybsameen labo qolo: mu'miniin iyo gaalo taasna waa doorashadooda iyo rabitaankooda iyo awooddooda, waxaas oo dhanna Ilaahay baa ku abuuray iyaga.
* Abaalgudka iyo ciqaabta waxay ku salaysan yihiin raacidda sharciga, ee kuma salaysna ogaalka Alle oo hore iyaga ku fulay, qofkii wax yar shar ah sameeyo waa lagu ciqaabayaa.
* Waxa la fiirinayo waa khaatimada camalka, addoon kastana waxaa loo fududeeyay wixii loo abuuray oo ah liibaanka jannada ama dhibka naarta.
* Sidaa daraadeed waxaa laga rabaa addoonka inuu ka cabsado khaatimada xun, inuu daa'imo weyddiisashada Alle iyo baahida uu u qabo Alle inuu ku hanuuniyo waddada toosan, sidoo kale inuu daa'imo inuu kaalmo u weyddiisto dhaacadiisa, inuu ka magangalo macsiyadiisa, maxaayeelay xeelad iyo awood addoonka arrintaas uma laha Ilaahay awooddiisa mooyee.
* Mu'miniinta way oggol yihiin qadaha Alle iyo qadarkiisa, kahyrkiisa iyo shartiisa, waqtiga rafaadka iyo barwaaqada, waxay yaqiinsan yihiin inuu qof iyaga wax u tari karin haddii Alle u qadaro mooyee, inuu qofna iyaga dhibi karin haddii Alle u qoro mooyee.
* Addoonka ma helayo macaanka iimaanka ilaa uu ka ogaado inuu yahay waxa isaga ku dhacay mid aan gafi lahayn, wixii gafayna inuusan soo gaari lahayn.
* Khaatimada: waxaan ku mahdinayaa Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada i galiyo aniga iyo muslimiinta oo dhan, iyo inuu naarta iga magangaliyo aniga iyo muslimiinta oo dhan.
Ilaahay naxariis iyo nabadgelyo ha yeelo nabi Muxamed korkiisa iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa,
Baryadeenana waxaa ugu dambayn mahad Ilaah baa leh Eebaha caalamka ah
More in this category: « Rumaynta maalinta aakhiro
A Survey of Hausa Language Misusage by some International Media